Maitiro ekushandura nzvimbo munzvimbo yekudyara portfolio? | Ehupfumi Zvemari
Maitiro ekushandura nzvimbo munzvimbo yekudyara portfolio?
Imwe yekiyi dzinoshanda kwazvo dzekugadzirisa zviwanikwa iri muchokwadi chekuita kutenderera kwakakodzera mumatunhu anoumba mari yedu yekudyara pamusika wemasheya. Izvi hazvifanirwe kumbomira, asi zvinopesana, zvinofanirwa kutongwa pasi pechakakura kuchinjika mukuvhiya kunoitwa. Kuwedzera nekubvisa hunhu kubva muchikwama, sezvinoita mabhanga nema modhi portfolio avo. Mupfungwa iyi, unogona kuisa zano iri kusimudzira mamiriro epfuma yako wega.
Sezvo iwe uchizonyatso kuziva sewe investor iwe zvauri, masheya kukosha ari pasi pemaitiro akasiyana mukati megore uye nekudaro iwe unofanirwa kusendamira kune ayo anoratidza akanakisa hunyanzvi chimiro nguva dzese. Ichi chiito chinoda danho repamusoro rekutarisa mavari kuitira kuti ivandudze portfolio yekudyara zvichibva pairi razvino runyorwa. Uku kuvhiya kunofanirwa kuitwa nguva nenguva uye izvo zvinoenderana neprofile yaunopa semudyari mudiki nepakati: ane hukasha, wepakati kana anochengetedza.
Kana iwe ukaita mafambiro aya, hauzongori kuwana kudzoka kuri nani pane kwako mashandiro, asi iwe zvakare uchave mune chinzvimbo chiri nani kutora mukana weakanakisa mabhizinesi mikana ayo anogadzirwa mumisika yemari. Kutenderera zvinzvimbo mumusika wemasheya kune rimwe divi zvakare iri zano rakakodzera ku dzivisa mamiriro asingadiwe nevatengesi. Ndokunge, kudzivirira kwakakosha kurasikirwa kwemari mumafambiro akaitwa.
1 Investment portfolio: nyowani iyo
2 Kubatsira kwekushanda kwemusika uyu
3 Unofanira kumutsiridza riini chikwereti?
4 Ndezvipi zvinhu zvekutarisa
5 Zvidzivirire kune zviitiko zvinotyisa
6 Tsaudzira kune zvimwe zvigadzirwa
Investment portfolio: nyowani iyo
Kazhinji, zvinogara zvichikurudzirwa kuti iwe uite kufamba uku, kamwe chete pagore. Izvo zvinokubatsira iwe kubvisa izvo zvakanyanya kunetsa tsika kuzvitsiva nezvimwe izvo zvine hukuru hwekuonga kugona kune anotevera makore. Iri zano rakapusa risingade zvinoda ruzivo rwakawanda yevauinazvo izvozvi. Kunze kwekungosara kwekuti iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunyatsoziva nezve shanduko yemisika yemari uye kunyanya nezvehunhu hwavo.
Kune rimwe divi, zvinoda kuzvipira mazuva ese kuratidza izvo zviri yakanyanya kubatsirwa uye kukuvara tsika yemamiriro azvino ehupfumi. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kumisa kurasikirwa kunogona kugadzirwa mune yako yazvino yekudyara portfolio. Mupfungwa iyi, hapana chakaipisisa kupfuura kuve wakasimba gore rimwe nerimwe kubvira pane imwe nguva uchaona kuti wakanganisa zvakakomba izvo zvinogona kukubhadharisa zvakanyanya. Iwe unofanirwa kuve nehanya zvakanyanya kune aya marudzi ezviito mumisika yemari. Usakanganwa nezvayo chero nzira.
Kubatsira kwekushanda kwemusika uyu
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kuti iwe utarise kubva panguva dzino dze a kutenderera chaiko yako yazvino yekudyara portfolio inogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekutanga. Ndokunge, kuburikidza nezano rakareruka sekusiya zvakashata tsika zvaunazvo pamusika wemasheya, ndiko kuti, izvo zvinogadzira kudzoka kwakaderera, uko kwavakaratidza chinzvimbo chakanakisa. Kuburikidza neiyi nzira yekudyara mutsauko unogona kuve wakakosha kwazvo kubva kune ese maonero maonero. Zvakawanda sekuwedzera capital yako nezvakawanda muzana muzana mapoinzi
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti mutsauko uripakati pezvakanakisa uye zvakaipisisa zviyero zvemari inogona kusvika kusiyanisa kweanopfuura makumi mashanu muzana kunyangwe mune zvimwe zviitiko pasi pezvikamu zvakakwirira. Uyu ndiwo muedzo wezvaunogona kuwana kubva ikozvino zvichienda uye uye mune chero mamiriro acho zvichave zvakakosha. Hazvishamisi kuti uku ndiko kuvhiya kuchakudhurira zvishoma uye izvo zvinomiririrwa nemakomisheni ekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Vanogona kusvika paavhareji mwero wepakati pe0,10% uye 0,20% pane iyo mari yakachengetwa uye zvichienderana nebhangi kwawakaita iko kushanda.
Unofanira kumutsiridza riini chikwereti?
Chekutanga chinodiwa kuti ushandise kufamba uku ndechekuvandudza yako portfolio yekudyara nguva nenguva. Ndeipi paramende iwe yaunofanira kusarudza? Zvakanaka mupfungwa iyi hapana mitemo yakatarwa, asi zvinopesana zvinoenderana nezvinhu zviviri zvinowirirana. Kune rimwe divi, iyo nhoroondo yaunopa semudyari mudiki nepakati, uye kune rimwe divi, mamiriro anounzwa nemisika yemari panguva iyoyo chaiyo. Saka kuti nenzira iyi, hausi kungova mukana wekudzora njodzi dzekushanda, asiwo kuita kuti mari yekudyara yeumwe neumwe wevatyairi ibatsirwe nekusimba kukuru.
Izvo zvakakoshawo kwazvo kuti uzive izvo haufanire kumutsidzira kana kushandura ese hunhu, kana zvisiri izvo chete zvine zvakaipisisa kuita mumisika yemari. Nekuti zvirizvo, zvinokurudzirwa chaizvo kuti iwe uite izvi nenzira ine mwero, pasina mafambiro echisimba anogona kutyisidzira pfungwa yechokwadi yekudyara. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Mupfungwa iyi, unofanirwa kumbobvira waongorora shanduko dzese dzaunoda kuita kubva panguva iyoyo. Usakanganwe kuitira kuti usatore kushamisika kushamisika kusingamirire iwe kubva chero kupi maonero
Ndezvipi zvinhu zvekutarisa
Kubva panguva yekutanga zvaunofanirwa kuronga ndeyipi nzira yekudyara iwe yaunoda kuitisa. Chero bedzi iwe usiri kujekesa pachinhu ichi, hauzokwanise kuita shanduko yepodfolio nenzira inoshanda uye yakaenzana. Muchiitiko chekuti iwe uri weane hasha investor profil, zvaunotarisa zvinofanirwa kutungamirwa mumusika wemasheya kune machengetedzo, zvikamu kana masheya indekisi kukura kukuru mukukura kwayo. Kunyangwe vari iwo mamwe anogona kuunza njodzi huru mukutora zvinzvimbo. Ndokureva, kugona kwavo kwekuongorora kunogara kwakakwira, asi panguva imwechete vanogona kukura kwakakosha mukukoshesa kwavo kana mamiriro ezvinhu avanofamba asiri akanakisa eaya anodikanwa.
Kune rimwe divi, usakanganwa kuti kana iwe ukasarudza iyi yakasarudzika zano iwe unofanirwa kuve uri pamusoro pekushanduka kwayo. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti panogona kuuya nguva yausina sarudzo kunze kweku nzvimbo dzepedyo. Zvichida nekuti iwe wakazadzisa zvinangwa zvako kana nekuda kwekuti shanduko yazvo yanga isingatarisirwe kwauri uye uri kurasikirwa nemari nenzvimbo dzakashama mune zvataurwa pamusoro zvemari. Icho, pasina kupokana, zano rakaomarara kupfuura iro rese uye iro richazoda kutarisirwa kwakawanda kubva kuchikamu chako kubva zvino zvichienda mberi.
Zvidzivirire kune zviitiko zvinotyisa
Mumwe mamiriro anogona kusimuka panguva ino ndeyekuti iwe unoda kupa yakanyanya kudzivirirwa kana chengetedzo kubata kune ako ekudyara. Kuti uzviite, uchafanirwa kusarudza kupinza mune yako inotevera yekudyara portfolio kuchengetedzeka mukati mabhegi akasimba uye zvekuzvidzivirira. Mupfungwa iyi, chiito chako chinofanira kuenda kuburikidza nekusarudza izvo zvinonzi zvimiro zvekupotera. Ndeavo vanoratidzira mashandiro ari nani pane iwo musika wevazhinji mumamiriro asina kunaka ezvekuenzana. Pakati pevamwe, unogona kusarudza makambani kubva kumagetsi, mugwagwa mukuru uye zvikamu zvekudya. Ivo, pasina kupokana, ndivo vanoita zvakanakisa mumhando iyi yemamiriro atinokumbira iwe mune iyi ruzivo.
Kune rimwe divi, iwo akateedzana ehunhu anoenderana neovanogovera pakati pevachagovana navo ne mugove wakakura wegoho iyo inofamba nemicheto iri pakati pe4% ne7%. Nenzira iyi, mari yakatarwa inogona kugadzirwa mukati memusiyano kuburikidza nemubhadharo wakatarwa uye wakasimbiswa gore rega. Chinhu chinonakidza kwazvo chechokwadi kumamiriro ekunze nguva dzekusagadzikana kukuru kumisika yemari. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Tsaudzira kune zvimwe zvigadzirwa
Chekupedzisira, panogara paine sarudzo yekusarudza zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinovandudza purofiti kana, zvikatadza izvo, zvinopa chengetedzo yakawanda, zvinoenderana nezviitiko zvingamuka kubva zvino zvichienda mberi. Kubva kudivi rekuchengetedza kwesarudzo, shanduko yemuchina inogona kutungamirwa ku mari yebhangi aptie kana emhando dzemari. Nepo pane zvinopesana, kana iwe uchida hukasha hwakanyanya mukudyara, sarudzo inogona kumiririrwa nemari yekudyara kana nemafomati matsva ekudyara. Zvichienderana nekusimudzira iwe kwaunoda kupa kune iyo mari.
Mukati meiri boka rekupedzisira, njodzi dzakakura zvakanyanya kupfuura mune mamwe mafomati, asi nebhenefiti yekuti vane tarisiro dzakakura dzekuchengetedza mari. Izvo zvinoitirwa mazwi akapfupika kupfuura mamwe ese, uye mamwe acho anoratidzwa nematanho epamusoro ezviyero izvo zvinoita kuti zvive nenjodzi kune zvido zvevazhinji varimari vadiki nepakati varimi. Nekuda kwekukosha kwakasarudzika kunounzwa nekirasi yekushanda mumisika yequity uye kuti havazi vese vanoziva mashandiro nemhando idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Maitiro ekushandura nzvimbo munzvimbo yekudyara portfolio?
Kuongorora kwemaitiro emusika wemasheya
6 Kuchengetedzwa Kunotengesa Pazasi peEuro Iyo Inotyisa Kwazvo